2 Mpanjaka 8 - Ny Baiboly
2 Mpanjaka toko 8
Elisea nampahazo ilay vehivavy Sonamita ny fananany, sy nilaza tamin'i Hazaela ny hahazoany ny fanjakan'i Siria - Jorama sy Okoziasa mpanjakan'i Jodà.
1Ilay vehivavy maty anaka novelomin'i Elisea, dia efa nilazany hoe: Miaingà hianao, ka mandehana mitoetra any amin'izay azonareo itoerana any, hianao sy ny fianakavianao. Fa efa nanafatra ny mosary Iaveh, ka tamy tokoa ny mosary, sady haharitra fito taona amin'ny tany. 2Koa niainga ravehivavy hanao araka ny voalazan'ny olon'Andriamanitra, ary lasa nandeha izy sy ny ankohonany, ka nitoetra fito taona tany amin'ny tanin'ny Filistina izy. 3Nony afaka fito taona, tafaverina avy any amin'ny tanin'ny Filistina ravehivavy ka nandeha hitaraina amin'ny mpanjaka, ny amin'ny tranony sy ny sahany. 4Ny mpanjaka kosa, niresaka tamin'i Giezi mpanompon'ilay olon'Andriamanitra ka nanao hoe: Mba tantarao amiko kely ny zava-dehibe nataon'i Elisea. 5Mbola niresaka tamin'ny mpanjaka ny amin'ny nananganan'ny tompony olona iray amin'ny maty teo izy, no inty ilay vehivavy renin'ny zaza maty novelomin'i Elisea, nanomboka nitalaho tamin'ny mpanjaka, ny amin'ny tranony sy ny sahany, ka hoy Giezi: Ry mpanjaka tompoko ô: inty eto ilay vehivavy, indro eo koa ilay zanany maty novelomin'i Elisea. 6Dia nanontanian'ny mpanjaka ravehivavy, ka nitantara izany taminy; dia nomen'ny mpanjaka eonoka anankiray izy, nataony hoe: Asaovy haverina aminy avokoa izay azy rehetra mbamin'ny vokatry ny saha rehetra, hatramin'ny nialany tatý, ka mandrak'ankehitriny.
7Nankany Damasa Elisea: ary narary Benhadada mpanjakan'i Siria, ka nilazan'ny olona izy, natao hoe: Tonga eto ilay olon'Andriamanitra. 8Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Hazaela: Mitondrà fanomezana hianao, mandehana mitsena ilay olon'Andriamanitra, ary izy no anontanio izay tenin'ny Tompo, ataovy hoe: Mbola ho velona amin'ity aretina ity ihany va aho? 9Nandeha nitsena azy Hazaela ary nentiny niaraka taminy hatao fanatitra ho azy izay zava-tsoa indrindra tao Damasa, dia entan-drameva efapolo. Nony tonga izy, dia niseho teo anatrehany, nanao hoe: Irahin'i Benhadada mpanjakan'i Siria zanakao aho, hiteny hoe: Ho velona aorian'ity aretina ity ihany va aho? 10Ary hoy Elisea taminy: Mandehana, lazao azy hoe: Ho velona marina tokoa hianao. Nefa nasehon'ny Tompo tamiko fa ho faty mihitsy izy. 11Dia nibanjina an'i Hazaela ity olon'Andriamanitra, ka nohandrininy teo io, any ka nahamenatra azy; dia nitomany ny olon'Andriamanitra. 12Ka hoy Hazaela: Nahoana no mitomany ny tompoko? Dia hoy ny navalin'i Elisea: Satria tsinjoko ny ratsy hataonao amin'ny zanak'Israely. Hodoranao amin'ny afo ny tanànany mimanda; hovonoinao amin'ny sabatra ny tovolahy ao aminy, hotorotoroinao ny ankizy madinika, ary hotatahanao ny kibon'ny vehivavy bevohoka. 13Fa hoy Hazaela: Zinona moa ny mpanomponao, izay alika foana ity, no dia hahavita zava-dehibe toy izany? Ary namaly Elisea: Efa nasehon'ny Tompo tamiko fa ho mpanjakan'i Siria hianao. 14Nony niala teo amin'i Elisea Hazaela dia niverina nankao amin'ny tompony, ka nanontaniany hoe: Ahoana no nolazain'i Elisea taminao? Ary namaly izy hoe: Izao no nolazainy: Ho velona marina tokoa hianao. 15Ny ampitson'izay naka firakofana anankiray Hazaela natsobony tamin'ny rano, dia nasarony ny tavan'ny mpanjaka, ka maty io. Ary Hazaela no nanjaka nandimby azy.
16Tamin'ny taona fahadimin'ny nanjakan'i Jorama zanak'i Akaba mpanjakan'Israely, raha mbola mpanjakan'i Jodà Josafata, no vao nanjakan'i Jorama zanak'i Josafata mpanjakan'i Jodà. 17Efa roa amby telopolo taona izy fony tonga mpanjaka, ary valo taona no nanjakany tao Jerosalema. 18Nandeha tamin'ny làlan'ny mpanjakan'Israely izy tahaka ny nataon'ny taranak'i Akaba, fa zanakavavin'i Akaba no vadiny, ka nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo izy. 19Tsy naringan'ny Tompo anefa Jodà, noho ny amin'i Davida mpanompony, araka ny fampanantenany hanome azy jiro tsy tapaka eo amin'ny taranany.
20Tamin'ny androny no nialan'i Edoma tsy ho ambanin'ny fanapahan'i Jodà, fa nanangana mpanjaka ho azy. 21Ka nankany Seira Jorama nomban'ny kalesy rehetra; nifoha mbola alina izy namono ny Edomita manodidina azy, sy ny lehiben'ny kalesy, ary nandositra nankany an-dainy ny vahoaka. 22Nitsoaka tsy ho ambanin'ny fanapahan'i Jodà intsony Edoma, mandrak'androany. Tamin'izany fotoana izany ihany koa, no nitsoaka ho afaka Lobna.
23Ny sisa tamin'ny asan'i Jorama mbamin'izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'i Jodà? 24Ary nodimandry any amin'ny razany Jorama, ka nalevina tao amin'ny razany, ao an-tanànan'i Davida; dia Okoziasa zanany no nanjaka nandimby azy.
25Tamin'ny taona faharoa ambin'ny folon'ny nanjakan'i Jorama, zanak'i Akaba, mpanjakan'Israely, no vao nanjakan'i Okoziasa zanak'i Jorama, mpanjakan'i Jodà. 26Efa roa amby roapolo taona Okoziasa, fony tonga mpanjaka, ary herintaona no nanjakany tao Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Atalia, zanak'i Amrì, mpanjakan'Israely. 27Nandeha tamin'ny làlan'ny taranak'i Akaba izy, ka nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo toy ny tarakan'i Akaba, fa vinanton'ny taranak'i Akaba izy. 28Niara-nandeha tamin'i Jorama, zanak'i Akaba izy, hiady amin'i Hazaela mpanjakan'i Siria, tany Ramota, any Galaada. Voaratran'ny Siriana Jorama, 29ka niverina ho any Jezrahela hampitsabo tena amin'ny ratra namelezan'ny Siriana azy tany Ramota, fony izy niady tamin'i Hazaela mpanjakan'i Siria. Nidina Okoziasa zanak'i Jorama mpanjakan'i Jodà, hamangy an'i Jorama zanak'i Akaba ao Jezrahela fa narary izy. >